Ibsa ABO Shanee Gumiiirra bahuu
Nuti miseensonni gameeyyi fi buleeyyiin ABO Shanee Gumiin gaggeefamu keessa bara dheeraafi sadarkaa fi birkii dirqama addaati jaarmayaa kana taligaa ture, Jaarmaya kana jabeessuuf yokaan humnna itti horree firii qabsoo akka fiduuf tattaaffii guddaa godhaa turre. Yeroo gaaga’amni adda addaa jaarmaya kana mudate kutannoo fi Murannoon bira dhaabannee akka irra dandamatu gochaa ture. Rakkoon qabsoo Bilisummaa saba Oromoo bu’uraan qoratamee akka furmaata dhumaa argatu gama keenyaan waan nurraa eegamu hunda gumaachaa ture.
Gama biraatiin hoggani jaarmayaa keenya qabsoo diree Oromiyaatti akka deebi’uuf yaada fi gaafii suduudan dhiheesafii akkasuma kaayyoon sabni Oromoo bara dheeraf itti warreegamaa as gahe, ummanni keenya kan biyyaa keessaa fi biyya alaa harka wal-qabate Jaalala fi tokkummaan akka diina isa dura dhaabatu fedhii qabnu ibsa ture. Garaagarumaan xixinnoon kan akka (gandumaa fi amantaa) jaarmayaa keenya keessatti akka hidda hin qabaanne gorsa walirraa hin citin kennaa ture.
Hunda caalaaTokkummaan jaarmayoota walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa saba Oromoo akka uumamu caraaqqii yeroo adda addaa godhamaa ture keessattiis akka milkin xumuramu gargaarsa nurraa eegamu hunda if kenniinsaan godhaati ture. Fedhii fi hawwiin sabni keenya tokkumaa qabsaa’ota Oromootiif qabu akka hojiin mul’atu nulleen abdii gudda qabaacha turre. Wal-hubannoon dhiheenya kana ABO Shanee fi ABO QC jiddutti godhame tokkumma dhugaa nutty fakkate gammachuu guddaadhaan simannee milkaawinaafiis waan nurraa eegamu hunda dirqama bahuufi gumaachuuf murannee turre.
Haa tahuu malee wal-hubannoon maqaa tokkummaatiin labsame akkuma asiin dura waggoota darban keessatti baratamee toftaa ittin jaarmayoota biraa dhabamsiisanii if qofa baka bu’aa saba Oromoo if taasisuuf tahe malee kan itita mooraa qabsoo bilisummaa oromoo uumani, qabsoo jabinatti jijjiiranii, firii qabsoo bilisummaa Oromoo fiduuf akka hin tahin ifa bahee jira. Yeroo qabsoon Oromoo tokkummaa dhugaa fi jaarmayaa jabaa barbaadu kana keessatti murni hoogansaa fidhee fi finniga (anarchism) amala faca’insa uume san irraa baratanii tokkummaa dhugaa fiduuf akka dantaaleen xixiqqoon fedhii isaanii caalu gorsinees fudhaachuun didame, akkasumaas yeroo humniti hooganoota ol’aanoo Jaarmaya kana hedduu if keessa qabdu kaayyoo bilisummaa Oromoo irraa maquun tokkummaa Ethiopiaf as bahaa jirtu keesati gochi ABO Shanee kun gocha boodessa akan abdi nama kutachiisu fi qaamni kuni akka firii qabsoo fiduuf if jijjiiree qabsoo kana firii itti godhuuf humnna hagoo tokko malee qabsaawota fi mooraa qabsoo bilisummaa oromoo tan kaayyoo fi akeekni keenya tokko tahe waliin walitti dhufeenya uumanii umnatti dhaaba keenya ABO jijjiiruuf akka fedhii hin qabne gooloo takka malee mullata. Abdii fi hawwii akkasuma jaalala ummanni Oromoo qabsoo jaarmaya ABO kanaaf qabu daranuu kan cabsu tahe jira, keesumattuu ABOn Shanee Gumii hireen saba keenya baka jiru akka diinaratti hin waraaqne gufuu tahun isaani irra deddeebi’ee mul’atee jira.
Kanaaf, nuti miseenson gameeyyi fi buleeyyiin ABOn Shanee Gumii ammaan booda hoogana ABO Shanee Gumii jala turuun itti gafatama seenaa fi qabsoo bilisummaa saba Oromoo irrati cubbuu gochuu waan nutty tahuuf hoogana kana wajjiin turun barbaachisa akka hin taane hubannee jirra.
Guyyaa har’a irraa kaafnee ABO Shanee Gumii farra qabsoo Oromoo tti jennee biraa bane jirra. Murtii keenya kanaas saba Oromoo fi jaarmayoota walabummaa fi bilisummaa Oromoof dhaabatan, akkasumaas qabsaawota ilmaan Oromoo hundaaf ibsa goona. Qabsaawota dhugaa waliin dhabannee qabsoon saba Oromoo firii itti godhuuf akka kaayyoo Walabummaa fi Bilisummaa Oromoo galmaa gahuu qabsoo itti fufna.
Miseensota Gameeyyiifi Buleeyyii ABO